Rivo Rakotovao: Nampidera seza vaovao taty Mahajanga
Taorian'ny nahavoatendry azy ho loholona sy nahavoafidy an'i Rivo Rakotovao ho filohan'ny Antenimierandoholona dia nitsidika ny tanànan'i Mahajanga izay sady toerana nahalehibe azy izy ny 04 novambra teo.
Toy ny mahazatra, fihetsiketsehana ara-politika sy fisehosehoana ny anton-dian'ireo delegasiona taty an-toerana. Notronin'ireo minisitra maromaro toy ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Rasoazananera Monique, minisitry ny asa vaventy Razafimandimby Eric, minisitry ny fambolena sy ny fiompiana Randriarimanana Edmond, minisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana Harry Laurent Rahajason, ary ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra Nepatraika.
Tonga taty an-toerana ihany koa ireo mpikambana vitsivitsy amin'ny Antenimierandoholona.
Tsy nisy ny tena anton-dia mazava na iraka nataon'ireo delegasiona taty Mahajanga fa fisehosehoana no betsaka. Tahaka ny mahazatra filana dera amin'ny tsy fahaiza-manaon'ny fitondrana HVM no natao ary nahazo fampanantenana poak'aty indray ny vahoaka.
Efa hiditra telo taona aty aorian'ny nahalany Ben'ny Tanàna azy moa no nampisaloran'ny Loholona Rivo Rakotovao ny samboady maha Ben'ny Tanàna azy i Mokhtar Andriantomanga.
Ireo Ben'ny tanâna sy sefo Fokontany no nampirisihina mafy hanamafy fototra ny HVM ato anatin'ny Faritany fa izany hono no fampandrosoana. Efa zary fomba fanao mahazatra ny fanambatambazana ny vahoaka hanotrona amin'ny fampisehoana maimaimpoana sy ny fanambazana ireo fikambanam-behivavy nandray anjara tamin'ny diabe niainga teny amin'ny Fokontany Manjarisoa izay tanana nahalehibe ity olom-panjakana ity.
mardi, 12 décembre 2017 18:00
mardi, 12 décembre 2017 15:03
mardi, 12 décembre 2017 00:46
lundi, 11 décembre 2017 15:10
lundi, 11 décembre 2017 02:52
dimanche, 10 décembre 2017 13:19
samedi, 09 décembre 2017 22:43
samedi, 09 décembre 2017 18:55
samedi, 09 décembre 2017 16:33